Tag: iPhone 6 email yekuongorora bvunzo | Martech Zone
Tag: iPhone 6 email yekutarisa bvunzo
Nei email kuendesa zvine basa? Sekureva kwe2015 Email Dhata Yemhando Mitauro Rondedzero naRuzivo, 73% yevatengesi vakataura kuti vane matambudziko nekutumirwa neemail. Return Path yakazivisa kuti pamusoro pe20% yeemail yepamutemo inoshaikwa. Pasina mubvunzo, mabhizinesi anosangana nezvinetso nekuendesa, uye izvo zvinokanganisa zvisizvo mutsara wepasi. Kwemakore, Return Path anga ari iye mutungamiri weindasitiri mune yeemail yekuendesa nzvimbo pasina yakawanda, kana iripo, makwikwi. Nekusvika kwe250ok, uye a